Shot yensimbi, Steel Grit, Engagqwali Shot - TAA
Ukunikezela ngama-abrasives ekhwalithi ephezulu
Isici somkhiqizo Qinisa kakhulu, ukuqina okuphezulu, impilo ende yokusebenza. Ukwephuka okuphansi, uthuli oluphansi, ukungcola okuphansi. Ukugqoka okuphansi kwezinto zokusebenza, impilo ende yokufinyelela. Nciphisa umthwalo wesistimu yokudonsa, yelula isikhathi sokusetshenziswa kwama-dedusting equipments. Ukucaciswa kobuchwepheshe Ukwakheka kwamakhemikhali% C 0.10-0.20% Si 0.10-0.35% Mn 0.35-1.50% S ≤0.05% P ≤0.05% Ezinye izinto ze-alloy Ukungeza i-Cr Mo Ni B Al Cu njll Ubulukhuni HRC42-48 / 48-54 Microstructure Duplex isakhiwo co ...
Izici * Ingasetshenziselwa ukufaka esikhundleni izihlabathi ezahlukahlukene zamaminerali nama-abrasives angenasici, afana ne-corundum, i-silicon carbide, i-quartz ebusayo, ubuhlalu bengilazi, njll. * Ingashintsha ingxenye yenqubo yokukha. * Ukukhishwa kothuli okuphansi nemvelo yokusebenza enhle kakhulu, kunciphisa ukwelashwa kwemfucumfucu yokuchofoza. * Izindleko eziphansi eziphansi, impilo yesevisi iphindwe izikhathi ezingama-30-100 ukuthi ye-non-metallic abrasive efana ne-corundum. * Ngabe uB ...
Insimbi engagqwali yokusika intambo isetshenziswa kakhulu ukuqhuma / ukuqhuma komoya kwezinhlobo ezahlukahlukene zokuphonswa kwensimbi okungeyona eyensimbi, imikhiqizo yensimbi engagqwali, izingxenye ze-aluminium, amathuluzi wehadiwe, itshe lemvelo, njll, ukugqamisa umbala wensimbi nokufeza okushelelayo, okungenakho ukugqwala , matt fi nishing treatment surface eff ect. Ngekhwalithi enhle yensimbi engagqwali yensimbi eluhlaza okwenziwe, insimbi engagqwali ifakwa ngezinhlayiya ezifanayo nobulukhuni, obuqinisekisa impilo yenkonzo yayo ende nokuqhumisa okuhle ect. I-pe ...
Senze intuthuko enkulu ezintweni ezibonakalayo nakumasu ngesisekelo senqubo yokukhiqiza yendabuko. Sisebenzisa izinga okusezingeni ingxubevange steel wire njengoba substrate ukuthi ephakeme izakhiwo mechanical futhi kwenze kube uzinze kakhudlwana. Ukwenza ngcono i-wiredrawing craft eyenza inhlangano yangaphakathi iminyene. Ukwenza ngcono inqubo yendabuko yokuncika ethembele ngokuphelele ekuthintekeni ukunciphisa umonakalo ngesikhathi kuqhuma, kuthuthukisa impilo yesevisi. Into Yezobuchwepheshe Inkomba Chemi ...
Izinzuzo zomshini wokudubula umshini wokudubula onokwethenjelwa Ubuchwepheshe Bokuqhumisa: Imishini yokuqhuma yesigubhu yenziwa ngokuhlukahluka okuhlukahlukene, izinhlobo nosayizi. Zihlangene futhi zinezinyathelo ezincane kakhulu. Ukuhamba okuqhubekayo kungatholakala ngokuxhumanisa imishini eminingana. Isakhiwo esivumelana nokulungiswa: Ukugcinwa njalo kubalulekile ekulondolozeni inani lesikhathi eside semishini. Izinsizakalo ezinkulu kanye neminyango yokuhlola inikezela ukufinyelela okulula kuzo zonke izinto ezibalulekile. Ngenxa yalokho...
Amathuluzi wethu we-super-hard alloy akhiqizwa nge-brazing. Ngaphansi kwezimo ezithile, ungqimba lwedayimane luboshwe ngokuqinile ku-substrate yensimbi ngemuva kwenqubo yokuncibilika kwesimbi. Lolu hlobo lomkhiqizo lunezici zokusebenza kahle kokugaya, impilo yokusebenza isikhathi eside, ukuphepha, ukuvikelwa kwemvelo nokungcoliswa-ngaphandle. Ngokuyinhloko shintsha amathuluzi okusika we-resin bond corundum wamanje kanye namathuluzi wokupholisha, wonke amathuluzi wedayimane aqhekekile futhi aphakathi nendawo aqhekekile, namanye amadayimane acindezelwe ashisayo ...
I-Sponge Media abrasive iyatholakala ngezinhlobo ezingaphezu kwezingu-20, ifinyelela amaphrofayli kusuka ku-0 kuye ku-100 + micron. Konke kuthola ukuqhuma okomile, okuphansi, ukuqhuma okuphansi okuphindayo. Uchungechunge olusetshenziswa kakhulu yi-TAA-S uchungechunge nge-aluminium oxide ne-TAA-G chungechunge ngensimbi. Thayipha Amaphrofayili Abrasive Media Agent Application TAA-S # 16 ± 100 micron Aluminium oxide # 16 Iyashesha futhi inolaka ngezingubo ezinzima zezimboni. I-TAA-S # 30 ± 75 micron Aluminium oxide # 30 Ukususwa kwezingubo ezinhlobonhlobo eziningi kanye nephrofayli kuye kuma-micron angama-75. I-TAA-S # 30 ± 50 micro ...
Uma kuqhathaniswa nensimbi yensimbi yendabuko eyenziwe ngokuchoboza insimbi, i-steel grit inezici ezilandelayo: I-Raw Material Bearing steel grit yenziwa yi-Chromium bearing steel enekhono elihle lokuqina ngenxa yokuqukethwe kwayo okuphezulu kweChromium. Ubuchwepheshe Ukuthwala uhlaka lwensimbi kwenziwa ngokuchoboza insimbi yokuthwala eyakhiwe ngqo engenaziphosiso zokuphonsa. Ukugqoka okuphansi Isimo esakhiwe esinezinsimbi zensimbi esinemiphetho ebukhali sinempahla ephakeme kakhulu kuneyendabuko yensimbi yensimbi ene ...
Ithuluzi lensimbi yinto yensimbi esetshenziselwa ukwenza amathuluzi wokusika, amathuluzi wokulinganisa, isikhunta namathuluzi wokugqoka amelana nensimbi.I-steel yensimbi inobulukhuni obukhulu futhi ingagcina ubulukhuni obuphezulu emazingeni aphezulu okushisa, kanye nokumelana nokugqoka okuphezulu nobulukhuni obufanele. ...
Ukuze uthuthukise ukusebenza kahle kokuqhumisa, ngabe ukhethe i-abrasive efanele?